ချစ်ရအောင်: blogspot.com မှ co.cc (domain name) ပြောင်းခြင်း
blogspot.com မှ co.cc (domain name) ပြောင်းခြင်း
ပထမဦးဆုံး http://www.co.cc မှာ အရင် account (sing up)ဖွင့်ရပါမယ် ... account မလုပ်ခင် ကိုလိုချင်တဲ့ url name လေးကို available ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာ အရင်မေးပြီးမှ လုပ်ရပါမယ် ... available မဖြစ်ရင်တော့ နောက်တစ်ခုထပ်ချိန်းပေါ့ဗျာ ...
လုပ်တဲ့နေရာမှာ www.yourname.co.cc (ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကိုလိုချင်တဲ့ နာမည်ကို yourname နေရာမှာ ဖြည့်ပြီးမေးရမှာပါ)
အားလုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့ set up အပိုင်းကိုသွားပါမယ် ဒါကလည်း လွယ်ပါတယ် ...
(၁) setup မှာ ဒီအတိုင်းလေးသွားပါမယ် setup >> Manage Domain ကိုသွားပါ ...
(၂) ပြီးရင် manage DNS/Zone Record/URL forwarding စတာတွေထဲက Zone Record တစ်ခုတည်းကိုပဲ ရွေးပါ ...
ပြီးရင် ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ အဆင့်အတိုင်း(၄)ဆင့်လုပ်လိုက်ပါ ...
- Host ဆိုတဲ့ ကွက်လပ်မှာ ကိုယ်ရွေးထားတဲ့ Domain ကိုထည့်မယ်
- TTL ဆိုတဲ့ ကွက်လပ်မှာ 1D
- Type ဆိုတဲ့မှာ CNAME ကိုရွေး
- Value ဆိုတဲ့ကွက်လပ်မှာတော့ ghs.google.com ကို ရိုက်ထည့်ပါ
- ပြီးရင်တော့ Setup ကိုနှိပ်ပါ
မှတ်ချက်။ www.yourname.co.cc မှာ (yourname ရဲ့ရှေ့မှာ www.) ပါပါစေ ..
- Host ဆိုတဲ့ ကွက်လပ်မှာ ကိုယ်ရွေးထားတဲ့ Domain ကိုထည့်မယ်(www. မပါပါ)
- Type ဆိုတဲ့မှာ A ကိုရွေး
- Value ဆိုတဲ့ကွက်လပ်မှာတော့ 64.233.179.121 ကို ရိုက်ထည့်ပါ
- ပြီးရင်တော့ Setup ကိုနှိပ်ပါ .
- Host ဆိုတဲ့ ကွက်လပ်မှာ ကိုယ်ရွေးထားတဲ့ Domain ကိုထည့်မယ် (www. မပါပါ)
- Value ဆိုတဲ့ကွက်လပ်မှာတော့ 66.249.81.212 ကို ရိုက်ထည့်ပါ
- Value ဆိုတဲ့ကွက်လပ်မှာတော့ 72.14.207.121 ကို ရိုက်ထည့်ပါ
ဒါဟာ co.cc အပိုင်းပြီးသွားပါပြီ . နောက်တစ်ပိုင်းက ကျွန်တော်တို့ ရထားပြီးသား domain name ကို ဘလောက်မှာ သွားထည့်ပြီး ချိတ်ဖို့တစ်ခုပဲ ကျန်ပါတော့တယ် .. blogspot.com အစား co.cc ပြောင်းခြင်းကိုဆိုလိုတာပါ ..
ကျွန်တော်ရှင်းပြတာ တစ်ခါတစ်လေ ကလေးတစ်ယောက်ကို ရှင်းပြတာနဲ့တူနေရင်တော့ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ် ..
အခုမှ စပြီးလေ့လာတဲ့သူတွေအတွက် ရည်စူးပြီး ဒီပို့စ်ကိုတင်ထားတာပါ ...
http://blogger.com ကို ၀င်ပြီ dashboard က setting >> publishing >> ကိုနှိပ်ပါ ..
ပြီးရင် switch to:Custom Domane >> Already ownadomain? Switch to advanced setting ကို နှိပ်လိုက်ပါ ..
ပြီးရင် တော့ ပေါ်လာတဲ့အကွက်ထဲမှာ yourname.co.cc (မိမိ ရပြီးသား co.cc ရဲ့ domain name) ကို ရိုက်ထည့်ပြီးလျှင်
Save setting ကို နောက်ဆုံးနှိပ်လိုက်ပါ ..
ကဲ co.cc အကောင့် ပြုလုပ်ခြင်းပြီးသွားပါပြီဗျာ .. :P